आधा घण्टामै सकियो नेकपा स्थायी कमिटी बैठक, के–के भयो ? - Everest Dainik - News from Nepal
आधा घण्टामै सकियो नेकपा स्थायी कमिटी बैठक, के–के भयो ?
काठमाडौंः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ । आइतबार दिउँसो १ बजे बसेको बैठक आधा घण्टामै सकिएको हो ।
बैठकले केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामाको निधनप्रति शोक प्रस्ताव व्यक्त गरेको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं दक्षिण कोरियाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत लामाको कोरोना संक्रमणका कारण मंसिर २५ गते निधन भएको थियो । गत मंसिर १० गते कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि लामालाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक लामा दुई पटक सांसदमा निर्वाचित भएमा थिए । केही वर्षअघि उनको मिर्गौलाको क्यान्सरको उपचार गरिएको थियो । उनमा मधुमेह र उच्च रक्तचापको समस्या पनि थियो । लामा सन् २०१२ देखि २०१६ सम्म दक्षिण कोरियाका राजदूत थिए ।
याे पनि पढ्नुस सकियो ओली र प्रचण्डबीचको छलफल
बैठकमा नेकपा प्रचण्डले प्रवक्ता श्रेष्ठलेबारे सार्वजनिक भिडियो अडियोबारे भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेका छन् । अर्को बैठक पुस १ गते १ बजे बस्नेछ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सहभागी छन् । यसअघिको बैठकमा ओली अनुपस्थित थिए ।
प्रचण्डसहितका बहुमत सचिवालय सदस्यहरू दुबै प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने अडानमा छन् । तर, ओली पक्षधरले भने दुबै प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव ल्याउन पहल गरिरहेका थिए । त्यो पहल सफल हुन सकेन ।
अन्ततः यसअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा दुवै प्रस्ताव अध्यननका लागि सदस्यहरूलाई दिइएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस नेकपाको आधिकारिक केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे
दुबै प्रस्तावमाथि छलफल गरेर साझा निष्कर्श निकाल्ने या सहमति नजुटेको खण्डमा विधानअनुरुपको प्रक्रिया अपनाएर केन्द्रीय समितिको बैठकमा दुबै प्रस्ताव लैजाने पक्षमा नेकपाभित्र बहुमत देखिन्छ ।
ओली पक्षले भने प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । पछिल्लो समय बैठक स्थगितपछि दुबै पक्षबीच सहमतिको अधिकतम प्रयास भएको थियो । तर, यो बीचमा कुनै सहमति जुटन भने सकेको छैन । दुबै पक्षले अधिकतम अडान र दबाब कायमै राखेका छन् ।
ट्याग्स: नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा, स्थायी कमिटी बैठक